WatchOS 8.3 Musharaxa Siideynta wuxuu ku darayaa AssistiveTouch Moodooyinka Apple Watch ee Da'da weyn | waxaan ka imid mac
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee cusub ee nooca cusub ee watchOS 8.3 Musharaxa Siideynta ayaa ah inay ku darto shaqada AssistiveTouch ee moodooyinka Apple Watch ee duugga ah. Tilmaamahan oo si gaar ah loogu sii daayay moodooyinka hadda ugu badan laga bilaabo SE ama Taxanaha 6 wixii ka dambeeya, ugu dambeyntii Waxay u timaadaa moodooyinka da'da weyn sida Apple Watch Series 4 iyo Series 5. Kani shaki la'aan waa war aad u wanaagsan maadaama ay bixiso suurtogalnimada in lagu daro VoiceOver, oo siinaya isticmaaleyaal badan.
1 AssistiveTouch waxay u iman doontaa Apple Watch ka weyn
2 Sida loo dhaqaajiyo AssistiveTouch on Apple Watch
AssistiveTouch waxay u iman doontaa Apple Watch ka weyn
AssistiveTouch wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho dhaqdhaqaaqyada gacanta si aad u dhex gasho oo aad isticmaasho Apple Watch. Habkan waxa uu ku shaqaynayaa gacanta gudaha goobaha, iyo marka aad gacantaada kor u qaaddo, giraanta buluuga ah ee ku wareegsan shaashadda Apple Watch waxa ay muujinaysaa in AssistiveTouch uu shiran yahay oo uu diyaar kuugu yahay in aad ku hawlgeliso tilmaanta caadiga ah ee samaynta feedh laba jeer. Waxaad ku beddeli kartaa midabka giraanta gudaha Helitaanka> AssistiveTouch> Midabka. Waxaad sidoo kale dami kartaa giraanta gudaha Helitaanka> AssistiveTouch> Dhaqdhaqaaqa gacanta> Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa.
Marka aad shido AssistiveTouch, giraanta diiradda ayaa ka soo muuqanaya agagaarka shayga ugu horreeya ee shaashadda. Giraanta ayaa tilmaamaysa in aad riixi karto shayga addoo isticmaalaya AssistiveTouch. Doorashadani waa really waxtar u leh kuwa qaba dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa gacmaha ama dhibaatooyinka guud ee cidhifyada sare si fudud u isticmaal saacadda.
Sida loo dhaqaajiyo AssistiveTouch on Apple Watch
Fur Apple Watch Settings app
Riix Helitaanka, ka dibna AssistiveTouch
Taabo AssistiveTouch si aad u dhaqaajiso, ka dib OK si aad u xaqiijiso. Waxa kale oo aad ku dhufan kartaa Isku day si aad u daawato muqaal hordhac ah
Mabda 'ahaan waxaa diyaar u ah isticmaalayaasha haysta nooca beta ee lagu rakibay, laakiin waxay la iman doontaa nooca ugu dambeeya dhawaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Nooca WatchOS 8.3 Musharaxa Siideynta wuxuu ku darayaa AssistiveTouch moodooyinka Apple Watch ee da'da ah
Frederic Felini dijo
Hello, waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado Apple Watch Series 7. Ma ii sheegi kartaa sida aad ula falgasho codsiyada taleefankayga? Ma heshaa ogaysiisyo kaliya mise ma jirtaa suurtogalnimada in lagu xakameeyo saacada? Tusaale ahaan, waxaan haystaa nidaamka ammaanka guriga Ajax in aan gacanta ku iyada oo loo marayo codsiga, ma aadi kartaa orod la'aan my phone, hubiyaa guriga iyo haddii ay dhacdo ma arki kaliya ogeysiis, laakiin sidoo kale la xakameeyo codsiga in ay saacad kasta. ? Mahadsanid.
U jawaab Frederico Felini
Duulimaadka injineerada mashruuca Car Apple ayaa raacaya
Aragtida Tignoolajiyada ee Safari ayaa gaadhay nooca 136